I-Millo Studio eduze kweCismigiu Park - I-Airbnb
I-Millo Studio eduze kweCismigiu Park
Lesi situdiyo esihle sitholakala enhliziyweni yeBucharest, eduze kwaseCismigiu Park. Inikeza igumbi elibanzi kanye ne-balcony enkulu kakhulu. Ungafinyelela ezindaweni ezihamba phambili edolobheni, nge-Calea Victoriei promenade boulevard ecacile ngakolunye uhlangothi, kanye ne-Cismigiu Park edumile ngakolunye.
Igumbi linophahla oluphakeme kanye nombhede wosayizi wendlovukazi (160x200), onikeza isikhala esiningi. Ikhishi lifakwe izinto eziningi kanye nemishini ongase uyidinge, njengesiqandisi esincane, isitofu sikagesi, umshini wekhofi, izinto zokusika, amabhodwe, amapani. Indlu yokugezela ineshawa yesimanje, usinki kanye nendlu yangasese. Uzohlinzekwa ngamathawula amasha nezinto zokugeza zamahhala njengensipho, ijeli yokugeza kanye neshampoo.
4.87 · 62 okushiwo abanye
Indawo ephakathi nendawo, eduze kwazo zonke izindawo ezikhangayo zaseBucharest. Umakhelwane UGCWELE izindawo ezinhle kakhulu edolobheni! ICismigiu iyipaki edume kakhulu eBucharest. Incane kakhulu, kodwa ngevayibhu enhle kangaka yayo yonke iminyaka!
Ngizotholakala nge-Airbnb nsuku zonke, kusukela ngo-09:00 kuya ku-21:00.
Ngokucabangela ubhubhane lwe-Covid, sizoyigwema imihlangano mathupha futhi sizozihlola thina mathupha.